मेडिकल माफियासित डटेर लड्छौँ– आवासीय चिकित्सक – Health Post Nepal
मेडिकल माफियासित डटेर लड्छौँ– आवासीय चिकित्सक
२०७५ माघ ९ गते १८:३४
अनशनरत डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा त्रिवि शिक्षण अस्पताल तथा वीरका आवासीय चिकित्सकहरूले आज बुधबार प्रदर्शन गरेका छन् । अनशनको १५औँ दिन टिचिङ र वीरका आवासीय चिकित्सकहरूले ‘मेडिकल माफिया होसियार !, वि आर विथ जी केसी, हामी चुप बस्दैनौँ’ लगायत नारासहित अस्पतालअगाडि करिब आधा घण्टा प्रदर्शन गरेका हुन् ।
टिचिङको प्रदर्शन : ‘सरकार नै माफियामार्फत मुठभेड गराउन उद्यत’
प्रदर्शनमा नेसनल रेजिडेन्ट डक्टर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. सुमित पाण्डेले मेडिकल माफियाहरूसँग मुठभेडको अवस्था आउन लागेको बताए । सरकारले केही दिनअघि मात्रै त्रिविका आवासीय डाक्टरहरूको प्रदर्शनलाई भाँड्न अस्पतालमा गुन्डा पठाइएको उनको भनाइ छ ।
खुलेआम रूपमा प्रहरीकै संरक्षणमा अपराधमा संलग्न विजय थापाको नाममा प्रदर्शन गर्न लगाएर सत्याग्रही डा. गोविन्द केसीको विरोधमा केही गुन्डालाई अस्पतालपरिसरमा परिचालन गर्नुले चिकित्सकमाथि घोर अन्याय भएको बताउँदै डा. पाण्डेले वर्तमान सरकारको यस्तो निकृष्ट कदमको भत्र्सना गरे । सरकारको यस्तो कदमले चिकित्सकहरूले आफ्नै घरभित्र असुरक्षाको महसुस गर्नुपरेको उनको भनाइ थियो ।
पार्टीको एक कार्यकर्ताको मेडिकल कलेजका लागि सरकारले देश नै डुबाउने षड्यन्त्र गरिरहेको बताउँदै डा. पाण्डेले अब चिकित्सकहरू चुप लागेर बस्न नहुने बताए । सरकारले सत्याग्रहलाई दमन गर्न खोजेर एकदमै नीच काम गरिरहेको पाण्डेको भनाइ छ ।
सरकारले डा. केसीसँगको पटक–पटकको सम्झौता, त्यसमाथि पनि पछिल्लोपटक आफू स्वयम्ले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेकाले अब चिकित्सकहरू चुप लागेर नबस्ने डा. पारस रायमाझीले बताए । यसपटकको आन्दोलन विगतको भन्दा कडा हुने डा. रायमाझीको भनाइ थियो । डा. केसीको माग व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिका लागि नभई सम्पूर्ण देश र जनताको हकहितका लागि भएको उनको भनाइ थियो ।
देशकै ठूलो र पुरानो केन्द्रीयस्तरको अस्पताल वीरमा पनि अनशनरत डा. केसीको समर्थनमा बुधबार बिहान ९ बजेदेखि ११ बजेसम्म आवासीय चिकित्सकहरूले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका छन् । प्रदर्शन अवधिभर आवासीय चिकित्सकहरू ओपिडीमा संलग्न नभएको डा. शरद बरालले बताए । आवासीय चिकित्सकहरूको पोस्टिङ हुने अन्य अस्पतालहरूमा पनि आज बुधबार विभिन्न समयमा प्रदर्शन गरिएको डा. बरालले बताए ।
बिहीबार नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा दिउँसो २ बजे हुने आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक भेलामा विभिन्न अस्पतालका आवासीय चिकित्सकहरू भेला हुनेसमेत बरालले बताए ।
चिकित्सा शिक्षा विधयेक